श्वेता खड्काको संसार | Narendra Raule
Posted By: Narendra May 13, 2016
Actress Sweta Khadka.
के गर्दै छिन् नायिका श्वेता खड्का ? कसरी बित्दैछ उनको दैनिकी ? आममानिसको मनमा कौतूहलता छ । विवाह गरेको दुई महिनामै जीवनसाथी गुमाएकी श्वेता गहिरो पीडा लुकाएर जिइरहेकी छिन् । त्यो अकल्पनीय क्षतिपछि उनी मुटु दह्रो बनाउँदै अघि बढिरहेकी छिन् ।
यतिबेला आफ्नै बुबा–आमासँग बालाजुमा बसाबास गर्ने श्वेताको मुहारमा पीडाको भाव झल्कँदैन । बरु उनमा आत्मविश्वास बलियो हुँदै गएको छ । चेहरा उज्यालिंदै गएको छ । उनी आफ्नो कर्ममा समर्पित भएकी छिन् । यस्तो लाग्छ, उनलाई बिझाइरहने चोट कतै हराइसकेको छ, क्रमश: मेटिँदै गएको छ । श्वेताले आफ्नो एक्लोपन मेटाउन आफूलाई जतिसक्दो काममा व्यस्त राख्ने प्रयास गरिरहेकी छिन् । तनाव र दौडधूपबाट टाढा भाग्न खोजिरहेकी छिन् ।
केही अघि श्वेता दरबारमार्गको राइजिङ मलमा आफ्नो योजना सुनाउँदै थिइन् । राजधानीमा उनका पाँचवटा नयाँ क्याफे सञ्चालनमा आउँदैछन् । अफिसमा भन्दा क्याफेमै भेट्न उनलाई सहज लाग्दो रहेछ । क्याफे जाँदा धेरै पैसा खर्च हुन थालेपछि उनलाई आफ्नै कफी हाउस सुरु गर्न मन लागेको रहेछ । क्यापेचिनो र अमेरिकानो पिउन रुचाउने श्वेता घरमा आफैं पनि कफी बनाउन अघि सर्छिन् ।
प्राय: बिहान ७ बजेतिर उनका आँखा खुुल्छन् । ब्यँुझिएपछि उनी फ्रेस भएर हल्का शारीरिक व्यायाम गर्छिन् । पहिले–पहिले क्लब जाने बानी थियो । अहिले त्यो क्रम टुटेको छ । समाचार पढ्न मोबाइल र आइप्याडको भर पर्छिन् । बिहानको १० बजे उनको खाना खाने समय हुन्छ । आफ्नी आमाको हातबाट बनाइएका सबै परिकार उनलाई मन पर्छन् । रेस्टुराँमा भने पिज्जा, स्पाइगेटी वा मम अर्डर गर्छिन् । प्राय: ११ बजेतिर उनी बालुवाटारस्थित कन्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनी पुग्छिन्, जहाँ उनी ६ वर्षदेखि अध्यक्ष छिन् ।
दिउँसोको समय मिटिङ, भेटघाट, सार्वजनिक कार्यक्रम एवं आफ्नो व्यापार सम्हाल्छिन् । श्वेता सपिङकी सौखिन हुन् । विदेश पुग्दा नेपालमा नपाइने कुराहरू किन्न मन लाग्छ । प्राय: मेकअपकै सामानमा उनको ध्यान जान्छ । मिसडियर र च्यानल उनलाई मन पर्ने परफ्युम ब्रान्ड हुन् । रोलेक्स घडी लगाएर हिँड्ने रहर पूरा नभए पनि अरू ब्रान्डका घडी आधा दर्जनजति छन् । उनका दुवै हातका औंला औंठीले सजिएका छन् ।
श्वेतालाई फर्मल पहिरनमा हिँड्न सजिलो लाग्छ । टिसर्ट, पाइन्ट र स्कर्टमा सजिएर हिँड्न रहर लाग्छ । सारी लगाउन मन लाग्छ, तर लगाउन आउँदैन । उनी महिनामा एक–दुई पटक ब्युटिपार्लर पुग्छिन् । मेलोडी टाइपका गीत, संगीतले उनको मन छुन्छ । कस्तो गीत सुन्ने ? त्यो मुडमा भर पर्छ । उनलाई त्यस्तो गीत सुन्न मन लाग्छ जसबाट ऊर्जा र उत्साह मिलोस् ।
श्वेता आफू सफल हुनुको श्रेय घर–परिवारको साथ, विश्वास त्यसमाथि श्रीकृष्णबाट पाएको उत्साह र सहयोगलाई दिन्छिन् । आफ्नै पैसा लगानी गरेर उनले व्यापार सुरु गरिन् । यतिबेला उनले झन्डै २५ जनालाई रोजगारी दिएकी छिन् । उनलाई धेरै धनाड्य हुन भने मन छैन । ‘सामान्य जीवन जिउन मन छ ।’ हँसिली श्वेताले भनिन्, ‘प्रयास गरिरहेकी छु, कहाँ पुग्छु थाहा छैन ।’ मनमा ऊर्जा र उत्साह बोकेकी श्वेतालाई व्यापारमा अझै राम्रो गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ ।
पाउल कोलिनका पुस्तकसँग श्वेताको ‘लभ’ परेको छ । कोलिनका पुस्तक पढ्दा–पढ्दै उनी कति ठाउँमा रोकिन्छिन्, कति ठाउँमा आँसु झार्छिन् । उनलाई ती पुस्तकका कथा कतै–कतै आफ्नै जीवनगाथासँग मिलेजस्तो लाग्छ । पुस्तकमा घोत्लिँदा–घोत्लिँदै कहिलेकाहीँ रातको १/२ बज्छ । मुड चले उनी डायरी लेख्न पनि बस्छिन् । श्वेतालाई हिन्दी चलचित्र आशिकी–२ पनि आफ्नै जीवनसँग मेल खाए झैं लाग्छ । उनी आफूलाई त्यही चलचित्रकी श्रद्धासँग तुलना गर्छिन् । चलचित्र हेर्दाहेर्दै उनका आँखाबाट आँसु झरेका थिए । ‘कहिलेकाहीँ उनलाई आफ्नै जीवनमाथि पनि चलचित्र बन्छ जस्तो लाग्छ ।’ भावुक हुँदै उनले मुख खोलिन्, ‘पुस्तकमा त मेरो कथा अटाउँदै अटाउँदैन होला ।’ यसबीच चलचित्रबाट अनेकन प्रस्ताव आए पनि उनले स्वीकार गरेकी छैनन् । बरु व्यापारमै बढी केन्द्रित भैरहेकी छिन् । कलाकार भएकोमा उनी खुसी छिन् ।
श्वेता आफ्नो एक्लोपन मेटाउन घर, परिवार र मिल्ने साथीहरूसँग घुमफिर गर्छिन् । जतिसक्दो बढी काममा व्यस्त रहन रुचाउँछिन् । फुर्सद भयो कि उनलाई तनाव हुन थाल्छ । हरेक मानिसलाई आफ्नो दु:ख ठूलो लाग्छ । उनलाई पनि बेला–बेला विगत सम्झिएर रुन मन लाग्छ । जब आफूभन्दा ठूलो दु:ख पाएका अरू मानिस देख्छिन्, तब चित्त बुझाउँछिन् । बरु आफूलाई सम्हाल्दै दुनियाँसामु उदाहरणीय बनेर देखाउने संकल्प लिन्छिन् । जब आफूसँगैका साथीहरू आफ्ना छोराछोरीको हात समाउँदै उनको छेउ पर्छन्, त्यति बेला उनी खुसी हुन्छिन् । आफूले पनि त्यसरी नै हिँड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खासै लाग्दैन ।
बरु श्वेताको नाम, उचाइ र स्वतन्त्र जीवनशैली देखेर उनका साथीहरू उल्टै ईष्र्या गर्छन् । त्यसले उनलाई एक प्रकारको सन्तोष मिल्छ । श्वेता आईफोन–६ प्लसबाट फेसबुक चलाउँछिन् । मन लाग्दा एप्पलकै म्याकबुक एयर, ट्याबलेट प्रयोग गर्छिन् । सहरको कोलाहलबाट भागेर कहिलेकाहीँ उनलाई टाढा एकान्त ठाउँमा जान मन लाग्छ । बेला–बेला उनी आफ्नो सुजुकीको स्वीप डिजायर गाडी हाकेर साथीहरूसँग बनेपा, नगरकोट, धुलिखेलसम्म पुग्छिन् । यात्राले उनलाई फ्रेस बनाउँछ ।
के श्वेताले फेरि अर्को विवाह गर्लिन् ? ‘आफूसँग जे छ त्यसमै रमाउँछु ।’ उनका ओठ चलमलाए, ‘मलाई कोही चाहिएको छैन । मात्र खुसी चाहिएको छ ।’ जीवनयात्रामा यही ‘खुसी’ पर्याप्त हुनेछ वा कसैको साथको आवश्यकता पर्नेछ भन्ने कुराचाहिँ भविष्यकै गर्भमा छ ।
Be the first to comment on "श्वेता खड्काको संसार"